Home WARARKA Xisbiyada isbahaysiga Mucaaridka Israel oo talada la wareeday
Benjamin Netanyahu ayaa xilkiisii waayay 12 sano kaddib markii uu hayay awoodda Israa’iil. Baarlamaanka Israa’iil ayaa cod ay ku taageerayaan siiyay dowlad isbahaysi oo cusub .
Naftali Bennett oo ah nin ka tirsan garabka midig islamarkaana ah nin ay waddaniyaddu madax-martay ayaa loo dhaariyay raii’sul wasaaraha cusub ee Israa’iil.
Mr Netanyahu ayaa dhankiisa qaadacay isbahaysiga cusub ee ay xisbiyada mucaaradku dhisteen.
Sida ku cad heshiiska awood qeybsiga, Naftali Bennet- oo ah nin diinta iyo waddaniyaddu ay ku wayn tahay ayaa muddo labo sano ah xilka rai’sul wasaaraha hayn doona waxaana kaddib kala wareegi doona hoggaamiyaha xisbiga dhexe Yair Lapid .
Markii ay baarlamaanka ay u codeeyeen isbahaysiga cusub ayaa waxaa markiiba xilka loo dhaariyay Naftali Bennet.
Kaddib dhaarintiisa ayaa waxaa uu kulan la qaatay golaha wasiirrada ee isbahaysiga cusub.
Naftali Bennett oo hadal u jeediyay golihiisa wasiirrada ayaa sheegay in shaqo culus ay hortaallo islmarkaana ay tahay in Israa’iil ay horey u socoto.
Benjamin Netanyahu ra’i’sul wasaarihii xilka soo hayay muddada 12-ka sano ahayd ayaa sheegay in maaddaama isaga iyo taageerayaashiisa ay ku sii jeedaan in ay mucaarad noqdaan aysan is dhiibi doonin ilaa ay ridaan dowlad uu ku tilmaamay in ay halis tahay.
Waxaa uu sidoo kale ammaanay taageerayaasha xisbigiisa islamarkaana waxaa uu qaadacay dowladda isbahaysiga cusub ee ay codka siiyeen baarlamaanka.
Mr Bennett, raii’sul wasaaraha cusub ee Israa’iil ayaa xilka hayn doona ilaa iyo bisha September 2023, sida uu dhigayo heshiiska isbahaysiga.
Mr Netanyahu oo ah siyaasi ruug caddaa ah ayaa hoggaamin doona xisbigiisa garabka midig ee Likud waxaa uuna noqonaya hoggaamiyaha mucaaradka.
Benjamin Netanyahu ayaa xilka rai’sul wasaaraha soo hayay shan muddo-xileed, waxaana markii ugu horreysay uu xilka qabtay 1996 ilaa 1999, halka laga soo bilaabo 2009 ilaa 2021 uu xilka hayay.
Previous article“Cabdikariinow Maanta adaa xilkii magalada qabanaya” Muuse Biixi
Next articleHow he built the biggest beverage in Somaliland?